Sicirka Dahabka oo gaaray meeshii ugu saraysay abid - Tilmaan Media
Sicirka lagu kala iibsado dahabka ayaa gaaray qiimihii ugu sareeyay taariikhda oo ah $2,000 wuqiyadii xilli Bangiyada iyo maalgashadayaashu raadinayaan meel ay xoolahooda ku badbaadsan karaan inta lagu guda jiro dhaqaale xumada kadhalatay COVID-19.Waxaana lafilayaa in dhamaadka sanadka soo socda ay sicirka wuqiyadda dahabka ah gaarto $3,000.
Qiimaha sicirka dahabka ayaa kordhay sanadkaan $30, iyadoo tirada dadka uu kudhacayo COVI-19 Maraykanka sii kordhayso islamarkaasna aysan jirin qorshe cad oo wax looga qabanayo mushkiladda dhaqaale xumo.
Kor ukaca sicirka dahabka ayaa loo sababaynayaa, in maalagashadayaasha iyo shirkadaha waawayn ay kacabsanayaan in sicir bararka kadhalan doona lacagaha aadka u faraha badan ee dowladuhu dhaqaalaha galinayaan ay waxyeelo kasoo gaarto hantidooda.
Siduu sheegay Bank of America, lacagta ay sheegeen wadamada caalamku in ay dhaqaalaha ku taageerayaan si loo yareeyo saamaynta COVID-19 ay gaarayso ilaa $20 tirilyan oo doollar.
Waxaa kaloo sababaha kor ukaca qiimaha dahabka kamid ah, rajjo xumada in dhaqaalaha Maraykanka uu si dhakhso usoo kabto iyo loolanka dhaqaale ee kadhaxeeya Maraykanka iyo Shiinaha.
Dahabka kaliya ma ahan, ee xitta waa kor ukac ku yimid qiimaha Fiddada tan iyo bilawgii sanadkaan.
Guud ahaan marka la,eego hoos udhaca kuyimid suuqyada shidaalka, guryaha iyo suuqyada saamiyada, waxaa muuqata macadanta qaaliga ah ee dahabku kamid yahay ay noqon doonaan meel xoolaha lagula soo cararo, waxayna ubadan tahay in qiimahu kor uga sii kaco halka uu hadda joogo